Fikarohana momba ny firaisana Famerenana sy fanovana ny hazakazaka: tantaram-piainana taloha ny afrikana afrikanina | Gedeon Haich sy ny fomba ahafahana manaporofo ny fisaraham-bazimba ankehitriny: Ny fahafatesan'i George Floyd - Fikarohana valiny
Elizabeth Haich, mpanoratra firosoana, dia manana Zanaka miaraka amin'ny Fahatsiarovana ny fiainany taloha
Gedeon Haich dia teraka tamin'ny 7 martsa 1921 tao Budapest, Hongria. Ny Vajdahunyad Castle, any Budapest dia aseho eo ankavanana. Ny ray aman-dreniny dia Subo sy Elisabeth Haich. Natsangana tao an-tokantrano Kristiana i Elisabeth, saingy taty aoriana dia nametraka fahalianana tamin'ny yoga izy ary taty aoriana dia nanoratra autobiograma ara-panahy mitondra lohateny, firosoana.
Ny fizarana ny bokiny dia natokana tamin'ny tranga nahaterahan'ilay zanany lahy ary nanome teny fohifohy avy amin'ny Gedeon tao amin'ny fitantarany izy. In Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, Ian Stevenson dia namerina ireo teny nindramina ireo.
Nilaza i Elisabeth fa nandritra ny fahazazany, dia tsy nanana boky momba an'i Afrika na toerana hafa niaraka tamin'ireo teratany maizimaizina i Gedeon. Tsy nahita sarimihetsika momba an'i Afrika izy ary tsy nahalala vahoaka Afrikana. Nilaza izy fa tsy nianatra ny toerana afrikanina na ny fomba amam-panao i Gedeon tamin'ny fomba mahazatra.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha, sary & Phobia an'ny filomanosana anaty farihy
Raha 4 hatramin'ny 5 taona izy dia nanamboatra fahazarana manintona ny olona amin'ny sary misy hoditra mainty hoditra. Rehefa nilaza i Elisabeth, renin'i Eoropa, fa nanakona ny tarehiny tamin'ny tarehiny izy dia tsy niraharaha azy i Gedeon ary nanohy nandoko ny volon'izy ireo.
Nandritra io fotoana io ihany, dia nahatsika toetra hafa tsy mahazatra i Elisabeth nandritra ny fotoana nandehanana tany an-tranony nandritra ny fahavaratra teo akaikin'ny farihy iray any Hongria. Rehefa niangavy ny hiaraka amin'ireo olona hafa ao amin'ny fianakaviana izay nilomano tao amin'ilay farihy i Gedeon dia nandà izy.
Nikiakiaka i Gedeon ka niady mafy mba ho afaka, mba tsy hiditra ao anaty rano. Tsy takatr'i Elizabeta ny fahatahoran'i Gedeon sy ny fanoherana ny hilomano ao amin'ny farihy. Nanamarika izy fa tsy namaly toy izany koa i Gedeon rehefa niditra tao anaty dobo filomanosana nataon'olombelona.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Gedeon dia nahatsiaro ny fianakavian'ny olona matevina sy mivoatra
Rehefa lasa 6 na 7 taona i Gedeon, dia tsy nampoiziny tamin'i Elizabeta fa noheveriny fa efa ela niainana izy. Nilaza izy fa tsaroany fa any amin'ny firenena hafa miaraka amin'ny olona samihafa. Nilaza izy fa nanana vady aman-janaka izy. Hoy izy nanohy:
"Ny vadiko sy ny zanako ary ny olon-kafa dia tsy mitovy ny olona eto; Izy ireo dia mainty mainty sy feno avokoa. "(1)
Avy eo i Elizabeta dia nanontany an'i Gedeon izay toerana niainany ary namaly izy tamin'ny alalan'ny fanaovana sarin'ny trano fialofana iray, misy tafo-kisoa izay voapetaka amin'ny setro-tsigara. Teo anoloan'ny tranom-bahiny dia vehivavy mitanjaka sy tony lava ary teo akaikin'ny trano bongo dia nisy renirano iray nisy onja teo amboniny. Gedeon dia nilaza fa ity vehivavy ity dia ny vadiny.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: ny vadin'i Gedeon taloha dia manana volo mihantona lava
Nanontany azy i Elisabeth hoe nahoana izy no nanintona ny vadiny tamin'ny trosan-tsofina lava lava. Nijery ny reniny i Gedeon, toy ny hoe tsy misy dikany. Hoy izy namaly:
“Satria izany no izy ireo. Ary tsy ratsy tarehy izy ireo. Tena tsara tarehy izy. ” (2)
Nanazava tamin'i Elizabeta ny antony niheverany fa efa ela niainana izy no nalahelo azy:
"Ary mihainoa, ry Mama, manontany ihany koa aho hoe ahoana no isaorana isa-maraina, rehefa mifoha aho ary tsy mbola misokatra ny masoko, avy hatrany aho dia mahatsapa fa tsy maintsy mitsambikina avy eo am-pandriana aho ary mandeha mihaza mba hahitako sakafo ny vadiko sy ny zanako. Rehefa mibanjina ny masoko fotsiny aho ary mijery ny efitrano izay tsaroako fa zazalahy kely sy zanakao aho. "(3)
Fiainana taloha Phobia avy amin'ny renirano sy ny Monster Lake
Nanohy nanoritsoritra ny androm-piainany i Gedeon ary naka sary izay nampiseho ny fitantarany.
"Niaina trano kely toy ireny izahay, izay natsanganay. Samy nanao sambo ho an'ny tenany ihany koa ny tsirairay avy tamin 'ny familiana sy ny fakana sary an-kitsirano ny hazo.
Nisy renirano lehibe iray, saingy tsy nisy afaka niditra tao izany araka ny azonay tany amin'ny farihy. Misy karazam-biby miaina anaty rano. Tsy tsaroako hoe inona ny hatsaran'ity, saingy kely ny tongotry ny olona ary izany no antony nitarainako tamin'ny herintaona raha toa ka te hiditra ao anaty rano avy amin'ny farihy aho.
Natahotra aho fa misy zavatra ao anaty rano afaka manaikitra ny tongotro; Ary na izany aza dia mahazo izany fahatsapana izany aho rehefa miditra ao anaty rano, na dia fantatro aza fa tsy misy zava-doza mampidi-doza ao anaty rano eto. (4)
Ian Stevenson dia nihevitra fa ilay biby goavam-be ao anaty renirano dia mety ho voay ary ny fiainana taloha dia ny hatairan'io biby mandady io dia tompon'andraikitra amin'ny fandalovan'i Gedeon ny lomano ao amin'ny farihy akaikin'ny trano fahavaratra.
Fomba fiaina taloha: Gedeon dia afaka manova lakana toy ny Acrobat
Na dia tamin'ny taona 6 na 7 aza, dia nanohy ny tantarany i Gedeon. Hoy izy tamin'i Elisabeth:
"Ary tsarovy, ry Mama, ahoana, rehefa nividy sambo ho an'ny fianakaviako aho dia te haka azy io. Nolazainao tamiko fa ny voalohany dia ny mianatra ny fomba handaminana azy. Saingy fantatro fa afaka mamolavola aho, satria azoko atao ny manamboatra ny sambokely ho lava toy ny hoe anisako ny rano. Afaka nipetraka teo amin'ny samboko aho ary niparitaka tamin'ny lafiny iray, nandeha teo ambanin'ny rano ary niakatra teny ampita, mbola tao anaty sambo.
Ary hoy ianao: 'Marina izany. Miezaha mamaky. Ho hitanao fa tsy afaka manao izany ianao. '
Dia gaga avokoa ianareo rehetra, rehefa naka ny iray hafa aho-ny tanako dia fohy loatra mba hikarakarana ireo alka roa-dia naneho fa afaka mamolavola sy manamboatra ny sambo eo anelanelan'ny sambo sy ny olona hafa aho. Afaka nanao ny zava-drehetra tamin'ny sambon'ny hazo izay nipetrahako aho. Tokony ho nahita ahy ianao! Ny hazo dia tsy toy ireo eto. "(5)
Avy eo i Gideona dia nanondro ny hazo izay nanintona azy, izay toy ny hazo palmie, izay manondro fa izy no karazam-boa efa nopotehiny ny sambony taloha.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Niady tamin'ny Bow sy Boomerang i Gedeon
Naka sary ny tenany koa i Gedeon tamin'ny fampiasana tsipìka sy zana-tsipika mba hikaroka vorona iray tao amin'ny hazo palmie. Naka sary hodi-kazo izay nampiasainy hihaza ihany koa izy. Nanazava i Gedeon fa rehefa nandroaka io fitaovam-piadiana io izy, dia hiverina irery izany. Na dia tsy fantany aza ny teny, dia nilaza i Gedeon Boomerang.
Fiainana Taloha Taloha Ho Fiantsoana ny Tazo
Raha vao 13 taona i Gedeon, dia nisy toe-javatra iray nanambara ny fahaiza-miaina miafina ho an'ny fihanihana hazo. Nihazakazaka nankany Elisabeth ny mpifanila-bodirindrina iray ary nihiaka hoe Gedeon dia niakatra teo an-tampon'ny hazo poplar iray izay 20-25 metatra ambony, izay mitovy amin'ny tongotra 65-80.
Nihazakazaka i Elizabeta ary niandrandra ny hazo. Tsy nahita an'i Gedeon izy, noho ny sampana sy ny ravin'io hazo io, saingy afaka naheno azy izy. Nangataka izy fa nidina izy. Tsy niasa saina intsony i Gedeon fa nidina tsikelikely, saingy tena nahay. Nilaza i Elisabeth fa nianika ilay hazo "tahaka ny feon-jana madinika" izy. (6)
Nanontany i Elisabeth hoe nahoana izy no nanao zavatra mampidi-doza. Namaly i Gedeon fa nanao ny akaniny teo an-tampon'ny hazo izy ary afaka nihinana voan-kafe voankazo, izay nanandrana tsara kokoa noho ny teo amin'ny tany. Nanamarika ihany koa izy tamin'ny fomba fijery mahatalanjona fa teo an-tampon'ny hazo izy.
Nilaza taminy i Elizabeta fa mampidi-doza loatra ho azy ny mianika tendrombohitra avo lenta ary mandidy azy hanangana ny akaniny eny an-tany. Tamin'izay, dia tezitra i Gedeon ary nandrora azy:
"Tiako ho fantatra hoe iza no nijery ahy fony aho tany anaty ala sy hazo niantsona ambony kokoa noho ity iray ity mba hijery biby. Taiza ianao? "(7)
Fiainana iray talenta ho an'ny trommel
Rehefa taona 15 i Gedeon, dia nanontaniany ny reniny mba hividy amponga azy. Nentin'i Elizabeta tany amin'ny fivarotana mozika lehibe indrindra tao amin'ilay faritra i Gedeon, ary nalain'i Gedeon ny amponga lehibe indrindra tao amin'ny fivarotana.
Rehefa nody izy ireo dia nanomboka nilalao ny baomba niaraka tamin'ny fahaiza-manaitra mahatalanjona i Gedeon. Nanao feon-javatra mahavariana izy ary toa tao anatin'ny toe-piainana hafahafa izy teo am-panaovana izany, na dia nitomany aza izy. Taorian'ny nilalao rhythm tsy mahazatra, dia hoy izy tamin'i Elisabeth:
“Hitanao ve Mama, izany no fomba ahafahantsika mandefa signal sy hafatra amin'izy samy izy amin'ny lavitra be.” (8)
Tsy fantatr'i Elizabeta ny fomba nianaran'i Gedeon tamin'ny fomba tena tsara, ary tsy azony hoe ahoana no nahalalany ny fahaizany mamandrika sambo miaraka amin'ny iray hafa, na mianika "tahaka ny bibilava kely."
Fihetseham-po taloha: Gedeon sobs rehefa mahita sehatr'i Afrika izy
Rehefa nanontaniana i Gedeon, fony izy mbola zaza, dia nilaza fotsiny izy fa tao anaty ala na tropikaly. Rehefa nanolo-kevitra an'i Gedeon, ho olon-dehibe, i Elizabeth mba hamaky momba an'i Afrika, dia namaly izy hoe:
"Inona no tanjona? Fantatro tsara ny zava-misy tany ary tsy mila mahafantatra ny hevitry ny fotsy hoditra. Ary rehefa mamaky ireo famaritana mazava aho dia mitomany, na dia miezaka tsy hanao izany aza aho. "(9)
Rehefa nandeha niaraka tamin'i Gedeon, ho olon-dehibe, ho any amin'ny sarimihetsika momba ireo teratany maizimaizina, angamba tany Afrika, dia nahatsikaritra fa nitomany izy ary nibitsika tsy an-kiato, nandritra ilay sarimihetsika.
Ary, amin'ny maha-olon-dehibe azy, dia nilaza i Gedeon fa tsapany fa tany Afrique tokoa izy tamin'ny farany, ary nanamarika fa nanana fiaraha-monina matanjaka ho an'i Afrika izy, na dia mbola tsy teo amin'ny fiainany ankehitriny aza izy.
Ny fahafatesan'i George Floyd: Ahoana no ahafahan'ny porofon'ny reincarnation manakana ny hadita amin'ny ho avy miorina amin'ny fanavakavahana ara-poko sy ara-poko.
Tamin'ny 2020, dia taitra noho ny fahafatesan'ny George Floyd eo am-pelatanan'ny polisy Minneapolis nandritra ny fisamborana azy. Nandohalika teo amin'ny hatok'i Floyd ity manamboninahitra ity rehefa nandry tamin'ny tany izy ary nofehezina tànana mandra-pahafatin'i George noho ny tsy fisian'ny rivotra ny havokavony sy ny famoretana ny lalan-drà tao amin'ny hatony izay nampisy fikorianan'ny rà ho an'ny ati-dohany.
Na dia mbola tsy nahitana ny fitsapana an'ity manamboninahitra ity ary tsy fantatsika izay ho vokatr'izany, dia misy ny marimaritra iraisana fa misy tsy refesi-mandidy any Etazonia amin'ny Amerikana afrikanina-afrikana. Caucasian aho, noho izany tsy mbola niaina mivantana an'izany, saingy tadidiko mazava tsara ny fizarana mampiseho ny fankahalana ara-poko, izay nitranga tamin'ny fiofanana momba ny fitsaboana ahy.
Nandeha teny amin'ny arabe iray tany Denver aho niaraka tamin'ny namako afrikanina-amerikanina iray, Keith La Grenade, MD, izay tao anatin'ilay fandaharam-pianarana fiofanana momba ny saina niaraka tamiko tao amin'ny University of Colorado.
Tsy nisy fihantsiana, ny mpamily fiara Kaokasianina nitondra fiara nandalo anay niantsoantso hoe:
Taitra aho, satria mbola tsy nahita faniratsirana firazanana toy izany tamin'ny fiainako. Nanontaniako i Keith: “Efa nitranga taminao ve izany?”
Namaly i Keith: "Amin'ny fotoana rehetra."
Taorian'ny nanoratako ireo andalana ireo dia nanana faniriana hifandray tamin'i Keith aho, satria tsy nifankahita nandritra ny taona maro. Nampalahelo fa fantatro fa maty tamin'ny taona 2016 izy.
Keith La Grenade, MD Fiterahana
Ny porofon'ny Reincarnation dia afaka manampy amin'ny famaranana ny Racisim
Ny porofon'ny fahaterahana indray dia mampiseho fa afaka manova ny fivavahana isika, ny tanindrazana, ny firazanana ara-poko ary ny fihazakazahana amin'ny fotoana iray. Rehefa mahatsapa ny olona toy izao ny fomba fiasan'ny fiainana, ny fototry ny fankahalana sy ny fitsarana an-tendrony amin'ireo izay hitantsika fa hafa noho ny tenantsika dia nanjavona. Ireo manana hoditra maizina dia afaka mihaona indray toy ny olona manana hazavana sy vis versa.
Amin'izany fomba izany, ny porofon'ny reincarnation dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa sy milamina
Raha tsy noheverina manokana momba ny fiainana taloha tany Afrika i Gedeon, tsy azo nekena ara-tantara ny tranga nisy azy. Ny tanjon'ity raharaha ity dia miankina amin'ireo talenta tsy ampoizina izay nasehon'i Gedeon, izay tsy andrasana amin'ny tanora Hongria.
Anisan'izany ny ankizy kely, ny fahaizana voajanahary mametraka sambo miaraka amin'ny iray hafa, mihanika hazo tahaka ny andoha ary afaka milalao rhythms sarotra amin'ny baomba tsy misy traikefa na fiofanana.
Ho fanampin'izany, ny phobia an'i Gedeon amin'ny filomanosana amin'ny farihy na renirano dia tsy azo hazavaina raha tsy misy ny fiainana taloha. Tamin'ny androny taloha tany Afrika, Gedeon dia nahatsiaro tahotra ny hiditra amin'ny renirano miaraka amin'ireo biby goavambe manaikitra ny tongotry ny olona. Ireo voay ireo dia voay indrindra.
Phobia avy amin'ny fiainana taloha: Araka ny efa nomarihina, manana vobia manana vatana voajanahary i Gedeon, izay toa nipoitra avy tamin'ny traikefa niainany tamin'ny voay.
Talenta sy fahaiza-manao taloha: Afaka misambotra sambo miaraka amin'ny andriamby iray i Gedeon, miakatra ny hazo tahaka ny amponga sy ny drum toy ny matihanina, tsy misy fiofanana na traikefa teo aloha teo amin'ny fiainany ankehitriny.
Reincarnation & Fiovana amin'ny hazakazaka: Nolazain'i Gedeon ny tenany, ny vadiny ary ny vahoaka ao amin'ny fokony ho toy ny kofehy mena midorehitra izay niaina tany amin'ny tany iray izay mety ho an'i Afrika. Gedeon, amin'ny maha olon-dehibe azy, dia naneho fiaraha-monina goavana ho an'i Afrika, na dia mbola tsy teo aza izy teo amin'ny fomba fiainany vao niova. Izy no nihevitra fa ny nahatongavan'izany tamin'ny fahatongavany tamin'ny taona lasa dia tany Afrika.
Zava-dehibe iray momba ny reincarnation lehibe iray koa izay mampiseho ny porofon'ny reincarnation afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa, izay novonoina ny olona iray noho izy jiosy amin'ny tontolon'ny Nazi, fa novaina indray ho Kristiana:
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 116
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 116
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 121
4. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 116
5. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 116
7. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 118
8. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 118
9. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 121